Home Wararka Shacabka magaaladda Boosaaso oo qabtay nin looga baqayay inuu dilal geysto
Shacabka magaaladda Boosaaso oo qabtay nin looga baqayay inuu dilal geysto
Qaar kamid ah Shacabka magaalada Boosaaso ayaa xalay gacanta ku dhigay nin hubaysan oo qori ku baaranayay dadka. Shacabka ayaa cayrsaday ninkaas oo tuute ku lebbisnaa islamarkaana qorigii ka qaaday waxaana isaga iyo qorigiiisi lagu wareejiyay Booliiska.
Booliiska ayaa xabsiga u taxaabay eedaysanaha oo aan weli la xaqiijin dhinaca uu ka tirsanaa iyadoo haatan baaritaan lagu hayo. Saraakiisha Booliiska ayaa Puntland Post sheegay in baaritaan kadib sharciga la hor-gayn doono ninka tuutaha iyo qoriga wax ku baaranayay ee shacabku qabteen.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey loolanka doorashada guddoonka guddiga FEIT oo ka socota Hotel Decale
Next articleKenya oo heegan gelisay ciidankeeda xili ay sadax sano ka soo wareegatay weerarkii Dusit D2
Puntland oo xirtay Gudoomiyaha Garabka Dhalinyarada ururka Mustaqbal